केटीहरु बासई हेरेर नै उनीहरु भर्जिन छ कि छैन भनेर था हुन्छ, कसरी थाहा पाउने? – Kavrepati
जापानले बनायो उड्ने बाइक, मुल्य सुन्दा उड्छ सबैको होस् (भिडियो सहित)
होटलमा युवती राखेर गर्थे यस्तो ब्यबसाय ! सुरेश र ऋषिले ति महिलाहरुलाई यस्तो सम्म गर्थे कि थाहा पाउदा प्रहरी पनि चकित पर्यो !
प्रेम विवाह गरेको श्रीमतीको मृत्यु भएको २५ दिन पछि श्रीमानले लाशलाई चिहानबाट निकालेर जे गरे कारण देख्दा सबै आश्चर्य चकित !
Home / रोचक / केटीहरु बासई हेरेर नै उनीहरु भर्जिन छ कि छैन भनेर था हुन्छ, कसरी थाहा पाउने?
केटीहरु बासई हेरेर नै उनीहरु भर्जिन छ कि छैन भनेर था हुन्छ, कसरी थाहा पाउने?
admin September 25, 2021	रोचक Leaveacomment 746 Views
यी २३ वर्षीया महिला जसले गरिन कसैले सोच्नै नसक्ने काम !
संसार यति गोल छ, त्यसैले यहाँ हुने सबै कुराको आफ्नै महत्व छ। हामी धेरै चीजहरुको ख्याल राख्छौं र केहि चीजहरु लाई बेवास्ता गर्दछौं। हामी हाम्रो जीवन मा हरेक दिन केहि गर्दैछौं जुन हाम्रो जीवन संग सम्बन्धित छ।यदि तपाइँ तपाइँको सानो चीजहरु वा तपाइँको अर्को कार्यहरु लाई ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाइँ धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, आज हामी तपाइँलाई केटीहरु को जीवन संग सम्बन्धित एउटा ठूलो रहस्य बताउन जाँदैछौं।
तपाइँ “पहिलो छाप अन्तिम छाप” भनी सुन्नुभएको होला तर न केवल तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ केटीहरु बस्ने तरीका बाट धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँ उसको स्वभाव को बारे मा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरु कस्तो स्वभाव को हो, तब छोरीहरु कसरी बस्छन् पत्ता लगाउनुहोस्। तदनुसार उनीहरुको स्वभाव के हुनेछ
त्यस्ता केटीहरु, त्यस्ता केटीहरु लाई थाहा छ कसरी जीवन मा अगाडी बढ्न को लागी, तर केटीहरु लाई लाग्छ कि जीवन मा आउने समस्याहरु लाई बेवास्ता गर्दै, यस्तो स्थिति मा समस्या स्वतः टाढा जान्छ।
उनीहरुलाई थाहा छ कि उनीहरु मात्र जीवन मा रमाईलो गर्न चाहन्छन्। यो गम्भीर छैन, किनकि उनीहरुको सोच यो हो कि सबै कुरा एक जीवनकाल मा मात्र एक पटक गर्नु पर्छ।
यस्ता बसिरहेकी केटीहरु प्रकृति मा चंचल हुन्छन्। यति मात्र हैन, उनीहरु केहि भन्नु भन्दा पहिले सोच्दैनन्, उनीहरु आफ्नो दिमागमा जे आउछ भन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई धेरै पछि पश्चाताप गर्नु पर्छ। यी केटीहरु प्राय केहि विशेष सम्बन्धहरु गुमाउँछन्, किनकि उनीहरु भन्दैछन् कि उनीहरु के भन्नु हुँदैन।
केटीहरु जो सीधा बस्छन् महान छन्। उनीहरु चुनौतिहरुलाई लिन मन पराउँछन्। हामीलाई बताउन दिनुहोस् कि यी केटीहरु अरु संग छन्, उनीहरुसंग धेरै साथीहरु पनि छन्, उनीहरु संग धेरै कुरा गर्न मन पराउँछन्।यति मात्र हैन, मँ तपाइँलाई बताउन दिन्छु कि त्यस्ता केटीहरु आफ्नो जीवन संगै जान्छन्, उनीहरु कसैबाट मद्दत लिन अनिच्छुक छन्।
Previous मध्य रातमा कुकुर रोयो, जसले जोगियो दुई नाबालक छोरी र आमाको ज्यान
Next पूर्वराजाहरुले प्रयोग गरेको श्रीपेचको मूल्य कति ?
काठमाडौं: प्रहरीले सा’मूहिक ब,’लात्कार गरेको आरोपमा ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ। असोज ३० गते ३ …